Jidka loo maro abuuritaanka bulsho loo wada dhan yahay – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Home › Forums › Madasha Dhalinyarada › Jidka loo maro abuuritaanka bulsho loo wada dhan yahay
April 4, 2022 at 11:56 am #3660 Reply
Qore: Abdulfetah Mohammed Farah*
Waxaa si weyn loo ku onkodeen hadal hayaa in Itoobiya ay tahay dal qowmiyad hedu ay yehinkuwa laga tirada badan yahay, marka la eego heer federaalka ma jirto qoomiyad gaar ah oo aqlabiyadda leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah qowmiyadaha aqlabiyadda ah tirada yar iyo kuwa laga tirada badan yahay ee heer deegaan.
Nidaamka federaaliga ah ee Itoobiya waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee degan dhul u gaara. Taasi waxay keentay in qoomiyadihii waaweynaa ay samaystaan ​​dawlad deegaano iyaga oo leh dastuur iyo waajibaad u gaar ah. Dawlad deegaanadda qaar ayaa loo qaabeeyey qoomiyadaha ay ka mid yihiin Oromada, Amharada, Tigrayga, Canfarta, Somalida, Hararida iyo Sidamada. Dhinaca kale, iyadoo la tixgalinayo siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha, qaabka deegaamaynta, dhaqanka iyo afka, dawlad-deegaanada aan cid qowmiyadaha aqlabiyaddasaameyn gooni ah lehi jirinayaa waxaa la aasaasay deegaanada sida Shucuubta Koonfureed, Benishangul-Gumuz, iyo deegaanka Gambela. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii ay Itoobiya ka hirgashay federaalaynta qowmiyadaha, waxaa soo baxay laba nooc oo dadka laga tirada badan yahay ah: deegaan iyo dool laga tiro badan yahay. Dawlad-deegaanada, waxaa jira dad laga tiro badan yahay oo ku abtirsada gudaha iyo dibadda dawlad-deegaanaddodaoo leh astaamo kala duwan.
Dhanka kale, Maqaalka Tsegaye, oo cinwaankiisu yahay “Kooxaha laga tirada badan yahay iyo raadinta is-dhexgalka bulsho-siyaasadeed ee Itoobiya”, ayaa tilmaamay qaar ka mid ah ka soocida siyaasadda bulshada iyo takoorka ay la kulmaan qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku abtirsada Itoobiya. Isaga oo qiraya sida wanaagsan ee uu maqaalka Tsegaye u sharaxay ka-reebista siyaasada bulshada ee kooxaha laga tirada badan yahay, waxa jira waxyaabo uu iska indho-tiray maqaalku. Haddaba, jawaabtan waxa loogu tala galay in lagu balaadhiyo dooda qadiyadda kooxaha laga tirada badan yahay ee Itoobiya iyadoo dhinac kale laga eegayo.
Horumarinta is-Dhexgalka Bulshada ee Dadka Laga Tirada Badan Yahay ee Itoobiya
Anigoo wali raacaya kala soocida dadka laga tirada badan yahay ee Itoobiya ee ku xusan maqaalka aan ka jawaabayo, waxaan jeclahay inaan balaadhiyo oo aan xooga saaro baahida weyn ee loo qabo bulsho loo dhan yahay Itoobiyadhexdeeda, gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay gudahadeegaanaddodaiyo kuwa lagatiraddabadanyahayeekabaxsandeegaanaddodadibadda ka ah ee Itoobiya. Si loo horumariyo hindisaha ka mid noqoshada bulshada waxa loo baahan yahay in laga sameeyo dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinacyada bulshada, dhaqaalaha, dhaqanka iyo siyaasadda heerar kala duwan oo leh istaraatijiyado ka mid ah bulshada.
Marka laga hadlayo qoomiyadaha laga tirada badan yahaygudahadeegaankoda, nidaamka federaalka Itoobiya waxaa loo ogol yahay bulshooyinka ku hordhaca ah deegaankaabtirsada inay dhistaan is-xukun heer deegaan ah ama heer gobol ah, oo ay ku jiraan aaga jinsiyadeed iyo heer degmo gaar ah. Qowmiyadaha leh gobol u gaar ah waxay xaq u leeyihiin inay ka qaybgalaan dawlad deegaanka iyagoo adeegsanaya hay’adaha gobolka oo u badan golaha deegaanka iyo maamulka oo u badan qowmiyadaha ugu badan ee gobolka. Sababo la xiriira kuwan, beelaha laga tirada badan yahay inta badan waxay wajahancaqabadahadib u dhigaan ka mid noqoshada dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed ee geeddi-socodka ballaaran ee go’aan gaarista ee heer deegaan.
Marka la eego heer qaran, nidaamka federaalka Itoobiya wuxuu isku dayay inuu kor u qaado ka mid noqoshada qoomiyadalaga tirada badan yahay ilaa xad iyadoo fursadaha matalaada ee dhammaan qoomiyadalaga tirada badan yahay ee heer federaal siyaabo kala duwan loo siiyay labada Aqal ee Baarlamaanka. Waxaa la siinayaa matalaadda dhammaan quruumaha, jinsiyadaha iyo dadka ee Golaha Federaalka (Aqalka Sare) si ay uga qaybqaataan sharciga iyo dejinta siyaasadda iyo geeddi-socodka hirgelinta ee dawladda federaalka. Sida uu dhigayo dastuurka FDRE, habka labaad ee matalaadda beelaha laga tirada badan yahay ee heer federaal waa matalaadda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee Golaha Wakiilada Dadweynaha (HPR); Dastuurku wuxuu dhigayaa in qoomiyadaha laga tirada badan yahay iyo dadyowga laga tirada badan yahay ay ku yeelan doonaan Golaha wakiilada ugu yaraan 20 kursi.
Iyadoo kuwani yihiin tillaabooyin loo qaaday jihada saxda ah, si kor loogu qaado ka mid noqoshada beelaha laga tirada badan yahay, haddana waxay u baahan yihiin in la waafajiyo dhaqaalahooda bulsho, mida dhaqan, diin iyo siyaasadeedba waa in siyaasad-dejiyeyaasha heer deegaan iyo kuwa heer qaran labaduba ay ku baraarugsanaadaan arrinkaa. Ka mid noqoshada siyaasadda ee dhammaan xubnaha bulshada, qaabka ka qaybgalka caanka ah ee hababka go’aan qaadashada iyo dejinta siyaasadda, waa arrin udub dhexaad u ah horumarinta isdhexgalka bulshada waana in la raadiyo dhammaan dhinacyada laga tirada badan yahay ee dalka.
Dhanka kale, arrinta ku saabsan qoomiyadaha kooxaha laga tirada badan yahay ee deegaanada kale ka yimid ayaa waxaa sii cakiran nidaamka federaalisamka ee qowmiyadaha iyo sida ay hay’adaha u dhiseen ee ah inay aayo-ka-tashi ugu yeeshaan kooxaha ku abtirsada dhulkooda iyadoo ay jiraan dad badan oo ajnabi ah oo ku nooldhulkaas oo ay weheliyaan kooxaha asalkoodu ka soo jeedo. Bulsho badan oo dibadda kaah deegaanaddodaayaa ku nool dowlad-deegaan kasta taasoo ka dhalatay ifafaalaha taariikhiga ah ee dhaqdhaqaaqa dadweynaha eejihooyin badan. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dawladaha ayaa ka saaray jiritaanka iyo aqoonsiga beelahaasqoomiyadahan, qaar kalena waxay aqoonsan yihiin iyada oo aan cidna metelin. Hase yeeshee, dadka laga tirada badan yahay ee dibadda ka yimid ayaa inta badan dhibanayaal u ah takoor, caddaalad-darro iyo ka-reebis bulsho oo lagu sameeyo fagaarayaasha bulsheed ee ballaadhan iyadoo aanay wax yar ka qayb-qaadan, saamayn ama xidhiidhna la lahayn hababka go’aan-qaadashada ee bulshadooda.
Waayadan danbe waxaan u kuurgalaynay in ay soo ifbaxday xasarad ka dhalatay nidaamkeena federaaliga ah oo ay ka dhalatay xurguf u dhaxaysa isku dheelitirka is-xukunka qowmiyadaha kala duwan iyo baahida loo qabo in la dhiirigeliyo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee shaqada iyo raasamaal ee qowmiyadaha shisheeye. Ka saarida qawmiyadaha ayaa ku badan Oromia, SNNPRS, Gambela, Benishangul-Gumuz, Amhara, Somali, iwm, kuwaas oo khatar ku ah qaranimada dalka.
Si loo horumariyo ka mid noqoshada bulshada, in la helo fursad uu qof walba uga qayb qaato hababka go’aan qaadashada waa muhiim. Ka mid noqoshada siyaasadda waxay keenaysaa in koox kasta oo bulsheed ay ra’yi ku yeelato go’aamada saameynaya noloshooda. Dawlad-deegaanadu waxay wax badan ka qaban karaan kor u qaadista aragtida siyaasadda, bulshada iyo ka mid noqoshada dhaqaalaha iyaga oo isticmaalaya shaqadooda. Tusaale ahaan, in la helo wakiillo dawladda ka socda oo ka kala socda dhammaan qaybaha dadweynaha waxay keeni kartaa hal dariiqo oo lagu abuuro dawlad kala duwan oo matasha. Dariiqooyinka kale ee kordhinta ka-qaybgalka siyaasadeed waxaa ka mid noqon kara xubnaha kala duwan ee gelitaanka bulshada iyo ka-qaybgalka samaynta siyaasadda.
Jid Suurtagal Ah Oo Hore Loogu Marin karo is Dhex Galka Bulshada
Abuuritaanka bulsho loo wada dhan yahay waa hannaan dhinacyo badan leh oo lagu xaqiijin karo oo keliya dadaalka dawladda iyo shacabkeeda si loo xaqiijiyo fursadaha loo siman yahay ee xubin kasta oo ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan uu ka qayb qaadan karodhinac bulsho, mid dhaqaale, iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeedba. Iyo sidoo kale ka qayb qaadashada hababka go’aan qaadashada.
Muddo dheer, shaqooyin qoraalobadan ayaa iftiimiyay tallaabooyin kala duwan oo lagu horumarinayo ka mid noqoshada bulshada ee dadka qoomiyadaha laga tirada badan yahay, qoraalkayga, waxaan ku nuuxnuuxsaday oo aan xoogga saaray saddex waddo oo hore loogu maro, oo kala ah ilaalinta xuquuqda bini’aadamka ee kooxaha qoomiyada halaga tirada badan yahay, ilaalinta siyaasadeed ee xuquuqda dadka qoomiyada halaga tirada badan yahay iyo horumarinta tillaabooyinka is-kaabaya ee awood qaybsiga iyo/ama madax-bannaanida dhulka.
Si kor loogu qaado ka mid noqoshada bulshada dadka qoomiyada ha laga tirada badan yahay eedeegaanada kale kasoojeedaiyo kuwa deegaankoodii joogaba, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo xuquuqda dadka qoomiyada halaga tirada badan yahay iyo xuquuqda muwaadiniinta shakhsi ee dastuurka federaalka, iyo dastuurrada dawlad-deegaanadaba ka dibna lagu fuliyo iyada oo loo marayo hababka hay’adaha oo ay ku jiraan maxkamado xooggan.
Arrinkan oo kale, waxa jira calaamado muujinaya horumar iyo tallaabooyin loo qaaday jihada saxda ah ee gaar ahaan lagu tilmaamay cutubka labaad (Qodobka 8-12) iyo Saddexaad ee dastuurka Federaalka Itoobiya. Hase yeeshee, waa kuwa ugu yar ee la dhaqan geliyo oo ay yar tahay rabitaan siyaasadeed oo lagu xoojinayo xorriyadda madaniga iyo siyaasadda. Sidaa darteed, si kor loogu qaado ka mid noqoshada bulshada laga tirada badan yahay, waxaa muhiim ah in la helo hay’ado dhexdhexaad ah oo madax bannaan iyo sidoo kale ilaalinta hay’adaha xooggan iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha dhammaan muwaadiniinta gaar ahaan kooxaha laga tirada badan yahay ee dalka.
Cabbirka labaad waa in awood loo siiyo dawladda federaalka in ay u noqoto ilaaliyaha dadka laga tirada badan yahay ee ku abtirsada gudaha iyo dibaddaba si looga hortago cabudhinta suurtagalka ah iyo takoorka ay ku hayaan aqlabiyadda qawmiyadaha qaranku. Iyadoo dastuurrada federaalka iyo kuwa ka kooban-cutubyada ay hubin karaan xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee ku abtirsada gudaha iyo dibadda, caqabada jirta ayaa ah in kooxda qowmiyadeed ee ka taliya hay’adaha siyaasadeed ay inta badan ka maqan tahay rabitaan siyaasadeed iyo dhiirigelinta fulinta xuquuqdaas.
Ugu dambeyntii, dariiqa kale ee looga bixi karo waa awood qeybsiga iyo/ama madax-bannaanida dhul-la’aan. Marka ay jiraan arrimo si xun looga saarayo beelaha laga tirada badan yahay, awood qaybsiga iyo/ama madax-bannaanida dhul-la’aanta waxay noqon kartaa dariiq looga baxo ka saarista beelaha laga tirada badan yahay. Habaynta awood qaybsiga waxay xaqiijin kartaa ka mid noqoshada bulshooyinka laga tirada badan yahay taas oo la wadaaga awoodda iyo dhulalka kooxaha qawmiyad-qaran loo arki karo mid la wadaago, danta guud, halka, madax-bannaanida dhuleed ee laga tirada badan yahay ay sidoo kale yeelan karaan boos siyaasadeed iyo dhaqameed halka kooxda qoomiyad-qaran ay sii wadaan inay ku raaxaystaan ​​is-xukunka.
* Abdulfetah Mohammed Farah waa Bare sare oo wax ka dhiga Jaamacadda Jigjiga.
Reply To: Jidka loo maro abuuritaanka bulsho loo wada dhan yahay